Akụkọ - Ị ma ụdị ụlọ ala ọ bụla?
Ala bụ ihe eji eme ụlọ nke anaghị adị mfe ịmehie na imewe yana dabara, yana enwere nhọrọ nke ihe ndị ọzọ dị n'ala, yabụ taa a ga m akpọrọ gị ka ị ghọta ụdị ala dị.
Isiokwu a na -enyocha ala anọ bụ isi:
Igwe eji arụ ụlọ arụrụ arụ (Parquet)
Osisi siri ike siri ike
Otu. Osisi e ji osisi rụọ (osisi siri ike mejupụtara)
Ụdị ụlọ osisi siri ike, nke a na-enwekarị ọtụtụ bọọdụ (akwa na-eguzogide, akwa ịchọ mma, akwa mkpụrụ osisi dị elu, akwa itule). Ọ bụ ezie na ihe mejupụtara ya bụ osisi, ọ kwụsiri ike karịa ala ụlọ siri ike: n'ihi na esicharala osisi siri ike mejupụtara ya, ọ nweghị nsogbu nke nrụrụ dị mfe dịka ala osisi siri ike. E jiri ya tụnyere ala ụlọ osisi siri ike, osisi siri ike mejupụtara ala dị gịrịgịrị ma sie ike, mana ọ nwere nnyefe ọkụ dị mma ma dịkwa mfe ilekọta.
Nke na-eguzogide na mkpakọ ② Usoro nrụnye dị mfe ③ Ọtụtụ usoro ④ Ọ dị mfe ilekọta ya
①Enweghị ike idozi ya ②Ọ na -esi ike, yabụ na ụkwụ ga -aka njọ. Ụfọdụ ala ga -eji gluu formaldehyde, yabụ enwere nsogbu nke ikuku formaldehyde. Mgbe ị na -ahọrọ, ị ga -ahụ ọnụọgụ nke ikuku ya nke formaldehyde. Ndụ: afọ 25-40 (ọ bụrụ na-echekwa ya nke ọma, enwere ike iji ya ogologo oge)
abuo. Osisi siri ike siri ike
Ala ụlọ siri ike, site na aha ya, ọ naghị esiri ike iche na ọ bụ ala ejiri osisi mee, yabụ na ọ ga -adị mma na gburugburu ebe obibi na eke. Agbanyeghị, n'ihi ihe okike nke osisi, ala e ji mee ya ga -adị nhịahụ n'ụzọ dị mfe ọ bụghịkwa mmiri. Ọ bụrụgodi na ọtụtụ ndị mmadụ chere na ala ụlọ siri ike ga -adịwanye elu, enweghị ike ileghara adịghị ike ya anya.
IsỌ dị nro, ọ ga -amasịkwa ọtụtụ ndị mmadụ n'ụdị ala niile. CauseN'ihi na enweghị ụkpụrụ a kapịrị ọnụ, ala niile bụ otu na nke ọma, yabụ enwere ike 'ime ka osisi siri ike' dị ọhụrụ 'site na ịchacha.
IsỌ dị mfe ịcha ② Nsogbu nrụrụ aka nke mmụba ọkụ na mgbachi na -ebute dịkwa njọ otỌ bụghị mmiri na -egbochi othỌkụ ahụhụ na nsogbu okwu obere oge requirementsNdị nlekọta dị elu
Ndụ ndụ: afọ 70-100 afọ
atọ. Laminate flooring (laminate flooring)
A na-eji osisi siri ike agbajikwa emee ala ya, esicha ya n'ime eriri osisi, wee pịa ya n'ọkụ dị elu dị ka ihe ndabere, wee kpuchie ya na ihe eji achọ mma, akwa na-egbochi mmiri, wdg. Ọ na-adịkarị n'ahịa. Maka na ọ dị ọnụ ala ma ọ chọghị mmezi nke ukwuu, ndị ahịa chọrọ ịrụ ọrụ ọnụ ahịa ga -eji ya n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs.
Ọ dị ọnụ ala ②Ndị ike siri ike na nguzogide abrasion siri ike patterns Ụdị dị iche iche stability nkwụsi ike dị mma, ọ dịghị mkpa itinye nnukwu nlebara anya na ndozi easy Ọ dị mfe ilekọta ya nke ọma, ala na ala agaghị ezo unyi na unyi.
A ga-enwe nsogbu ndị dị ka igwu ọkụ mgbe ọnya gasịrị foot Ụkwụ na-esiri ike ③Ọdịmma ya adịghị mma, ọ na-esiri ike ịchọta ụlọ dị elu ④Ọ bụrụ na usoro nha ahụ siri ike ma ọ bụ na nke gluu buru oke ibu, a ga-enwe ajọ njọ gburugburu ebe obibi nsogbu
anọ. Ngwongwo Vinyl (ala plastik)
Ụdị ala nke jiri nwayọọ nwayọọ mepụtara n'ime afọ iri gara aga. Ọtụtụ ndị mmadụ amachaghị ụdị ụlọ a. A bịa na vinyl flooring, ha ga -ejikọ ya na akpụkpọ anụ ala, runway plastik, wdg. Ọ bụghị naanị na ha ga -echegbu onwe ha maka nsogbu nchekwa gburugburu ebe obibi, kamakwa ha ga -echekwa na ọ nwere ike nwee nnukwu ụtọ. .
Mana n'eziokwu, ihe eji eme ụlọ plastik bụ polyvinyl chloride, ihe ejirila mee ihe na ndụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ngwa ahụike na -eji polyvinyl chloride.
Plastic flooring, nke a makwaara dị ka PVC flooring, kewara nke ọma na Vinyl Flooring (plastik plastik ọdịnala) na Rigid Core Vinyl Flooring (hard core plastic flooring), na isi ụlọ plastik siri ike ekewa n'ime WPC (osisi plastik osisi) na SPC ( Ala plastik nkume). N'ala) ụdị abụọ, yana ụdị abụọ a, n'ihe gbasara nchekwa gburugburu ebe obibi na ịdị mma ya, SPC ka mma:
-Abrasion na-eguzogide na mkpakọ ②Slip-proof ③Flame retardant ④ Ihe mgbochi mmiri na ihe na-egbochi mmiri ⑤Sound mkpuchi (mmịpụta ụda 20dB) ⑥Ndozi dị mfe na nlekọta dị mfe ⑦Okpomoku ọkụ ma na-ekpo ọkụ
Ụjọ nke iji ngwa dị nkọ kpụọ ya resistanceNdị na -eguzogide adịghị ọcha ③ E jiri ya tụnyere ụdị ala ndị ọzọ, ụkpụrụ ahụ dịtụ nfe
Ihe ndị dị n'elu bụ ụdị ala a na -ahụkarị na ahịa. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume ịchọta ala nwere ọnụ ala na ezigbo mma, ọ bụghị naanị ogologo oge ọrụ, kamakwa na -enweghị ndozi. Ị nwere ike ịghọta ala ọ bụla dịka emume ahụ siri dị. Njirimara nke ala: usoro nrụnye, ihe gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ ihe na-egbochi mmiri ma ọ bụ ihe na-egbochi mmiri, wdg, dabere na ozi niile dị n'elu, ekwenyere m na m nwere ike ịkwado ala dabara adaba maka onye ọ bụla.